Ngaba le vidiyo yokwenyani yee-AirPods 3? Hayi, bayaxoka | Ndisuka mac
Sele ziiveki ezimbalwa okanye endaweni yokuba sithethe malunga nokufika kwabanye ii-AirPods zesizukulwana sesithathu le nto siyibiza ngokuba ziiAirPods apha 3. Kule ngqiqo kungaphaya kokuqinisekileyo ukuba iApple izakusungula isizukulwane esitsha esaziwa kunye neefowuni ezinkulu kungekudala, kodwa ezo zibonakala kwividiyo esabelana ngayo apha ayizizo.
Kwaye sikhona nasiphi na isizathu esilungileyo sokumilisela ividiyo apho ezinye zicinga ukuba ii-headphone ze-Apple ziyavela kwaye zingqina ukuba ziya kuba njalo. Ukuhanjiswa okuninzi kwangaphambili kunye nokuvuza okuninzi kubonisa ii-headphone ezinokubakho kwaye umntu uza nokuqalisa ingxelo ebunjiweyo yabo kwaye bathi ziyi-Apple ...
Ngaphambili koku I-tweet ikhutshwe kwiakhawunti yomsebenzisi uDuan Rui kukho enye ebonisa ezi AirPods ezingezizo. Ungaya ngqo kwiprofayile yakho kwaye uyibone.
I-AirPods 3 iimveliso zomgunyathi. pic.twitter.com/QGGtGti3pB
-UDuanRui (@ duanrui1205) Aprili 8, 2021
Kwaye abahlalutyi benqanaba likaMing-Chi Kuo, walumkisa kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo malunga Ukufika kwezi AirPods zintsha zinefom yefomathi kunye noyilo olufana ncam nolo lwe-AirPods Pro Okwangoku kodwa ngumahluko othile ngaphakathi nangaphandle kweerubber ze-silicone kwinxalenye yokugqibela. Kungenxa yoko le nto sibona ezi zityholo zomgunyathi ze-Apple zangoku.
Kuyenzeka ukuba baphele benolu luyilo okanye ngokufana nale siyibonayo kwiividiyo zale akhawunti Ye-Twitter, kodwa sinokuqinisekisa ukuba ayizizo ezokuqala zeApple. Inyani yile yokuba xa kukhutshwa ezokuqala ziya kuba nazo iikopi zaseTshayina, njengazo zonke iimveliso ezisungulwe eCupertino.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ngaba le vidiyo yokwenyani yee-AirPods 3? Hayi bayinyani